Aiza no itehirizan'ny iTunes ny firmware an'ny iPhone, iPad? | Vaovao IPhone
Paul Aparicio | | Nohavaozina tamin'ny 25/03/2019 15:49 | iTunes, Fampianarana sy torolàlana
Avy amin'ny kinova iPhone OS voalohany, ny fisie na firmware an'ny fitaovana iOS manana ny extension .ipsw (iPhone Software). Fomba iray hanazavana ny atao hoe fisie .ipsw dia ny milaza fa ireo dia sary disk an'ny rafitra miasa ho an'ny fitaovana iOS. Amin'ny programa Mac sasany, ny sary kapila dia .dmg, amin'ny programa maro hafa dia tonga amin'ny endrika format .iso ireo sary ireo ary, na dia tsy hosoratana anaty kapila aza izy ireo, ireto karazana sary ireto ho an'ny iPhone, iPod Touch na iPad dia ny .ipsw fisie.
Amin'ny maha firmware na rafitra miasa azy ireo, .ipws fisie dia ilaina amin'ny fanavaozana na famerenana amin'ny laoniny iPhone, iPod Touch na iPad avy amin'ny iTunes, noho izany dia afaka manokatra azy ireo amin'ny mpilalao Apple zanatany ihany isika, na amin'ny solosaina Mac na Windows (tsy misy amin'ny Linux). Amin'izany nohazavaina dia mbola betsaka ny azo hazavaina ary amin'ny sisa amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hamaha ny fisalasalanao rehetra momba ny firmware an'ny iOS fitaovana.
1 Aiza no hamonjy iTunes firmware
1.1 Amin'ny Mac
2 Ahoana ny fomba hanokafana IPSW ao amin'ny iTunes
2.1 Amin'ny Mac
2.2 Amin'ny varavarankely
3 Ahoana no hahalalana raha mbola manasonia kinova iOS i Apple
4 Aiza no misintona ny kinova iOS ho an'ny iPhone na iPad
5 Aiza no misintona ny kinova iTunes farany
6 Ahoana ny fanavaozana ny iTunes
Aiza no hamonjy iTunes firmware
Toy ny rafi-pandaminana hafa, rehefa misintona firmware ho an'ny iPhone, iPod Touch, na iPad ny iTunes, dia miditra ao izany zotra samihafa miankina amin'ny navoakanay tamin'ny Mac na Windows. Ireto ny làlan-kaleha:
~ / Library / iTunes / Fanavaozana ny lozisialy iPhone
Raha te hiditra ao amin'ity fampirimana ity dia mila manokatra ny Finder, kitiho ny Mandehana menio ary tsindrio ny bokotra ALT, izay hanao ny Biblioteca.
C: / mpampiasa / [Anaran'ny mpampiasa] / AppData / Roaming / Apple Computer / iTunes / iPhone Software Fanavaozana
Ao amin'ny Windows dia hafenina ireo lahatahiry, noho izany dia tsy maintsy ampiasaintsika ny "Asehoy ireo lahatahiry miafina" na amin'ny fomba tsotra adikao ary apetaho ilay lalana ao amin'ny bara adiresin'ny File Browser.
Avereno ny iPhone
Ahoana ny fomba hanokafana IPSW ao amin'ny iTunes
Na dia ho an'ny iTunes ihany aza ireo rakitra .ipsw, tsy hisokatra ho azy raha tsindrio avo roa heny amin'izy ireo isika. Raha hanokatra azy ireo dia tsy maintsy ataontsika izao manaraka izao:
Manokatra iTunes izahay
Misafidy ny fitaovanay avy eo ankavia ambony izahay.
Ary eto no misy ny zava-dehibe: tsindrio ny bokotra ALT ary tsindrio Restore na Update.
Izahay dia mitady ilay rakitra .ipsw ary manaiky.
Ao amin'ny Windows dia saika zahana ny fizotrany, miaraka amin'ny tsy fitovizany izay tsy maintsy solointsika ny lakilen'ny ALT fanovana (sora-baventy). Ho an'ny zavatra hafa rehetra, ny dingana dia mitovy amin'ny an'ny Mac.
Ahoana no hahalalana raha mbola manasonia kinova iOS i Apple
Na dia marina aza fa ao amin'ny Actualidad iPhone dia ampandrenesintsika matetika rehefa mijanona tsy manao sonia kinova iOS izy ireo, marina ihany koa fa mety te hahalala ny satan'ny kinova izay namoahanay lahatsoratra iray hatry ny ela. Ny fomba tsara indrindra hahafantarana raha manasonia kinova iOS i Apple dia ity manaraka ity
Andao mankany amin'ny tranokala ipsw.me
Misafidy ny firmware ho an'ny fitaovantsika izahay
Asehonay ny menio firmware ary, ao amin'io fizarana io ihany, dia hahita maitso isika raha mbola vita sonia ilay kinova iOS. Tsy mora izany.
Amin'ny tranokala iray ihany dia afaka miditra amin'ny fizarana "Signed Firmwares" isika na amin'ny fikitihana mivantana Ity rohy ity. Raha vantany vao eo amin'ilay pejin-tranonkala dia tsy maintsy misafidy ny fitaovantsika fotsiny isika ary manamarina raha manohy manasonia ilay kinova mahaliana antsika i Apple.
Aiza no misintona ny kinova iOS ho an'ny iPhone na iPad
Tranonkala iray tena tsara sy nohavaozina vao tsy ela akory izay no nikatona izay ahafahantsika misintona firmware na rafitra fiasa Apple, ary koa hahitana raha mbola misy sonia ny firmware. Na izany na tsy izany, ankoatry ny tranokala teo aloha, dia manana ny safidy getios mahazatra sy mora tadidy foana isika. Mora tadidy satria "mahazo iOS" amin'ny teny Anglisy (Get iOS) .com. Ao amin'ny getios.com hananantsika ny firmware rehetra izay ilainay. Raha ny marina dia misy ny sasany izay tsy misy sonia intsony, noho izany dia azo antoka 100% fa ho afaka hisintona izay rindrambaiko ho an'ny iPhone, iPad, iPod Touch ary Apple TV izay manohy sonia izahay.
Aiza no misintona ny kinova iTunes farany
Ao amin'ny Mac, iTunes dia apetraka amin'ny toerana misy anao. Na izany na tsy izany, azontsika atao foana ny manala azy amin'ny tsy antony na noho ny antony sasany, ka tsy maintsy hamerenantsika azy io indray. Ho an'ity, ampy izay raha mankany amin'ny Tranonkala ofisialin'i iTunes ary andao ampidino izany. Ny tranonkala iray ihany dia manan-kery ho an'ny Mac sy Windows ary hanolotra anay ny fampidinana kinova iray na hafa arakaraka ny rafitra itsidihantsika ny tranonkala.
Raha te-hisintona kinova hafa isika dia mila mikorisa fotsiny ary mifantina "Get iTunes for Windows" ho an'ny Windows na "Get iTunes for Mac" hampidina ilay kinova ho an'ny OS X.
Tadidio fa tena zava-dehibe izany havaozina ny iTunes hametrahana ireo kinova farany an'ny iOS amin'ny iPhone na iPad antsika, noho izany, hanazava ny fomba fanaovana azy eto ambany izahay.
Tutorial Free kaonty iTunes ary azonao atao ny misintona ny fonosan'ny cd
Ahoana ny fanavaozana ny iTunes
Raha te hampiasa fiasa vaovao isika na hamarino fa mampiasa ilay andiany farany amin'ny iTunes, tsy maintsy manamarina isika raha mampiasa ilay kinova nohavaozina indrindra. Ity misy fomba fanavaozana ny iTunes amin'ny Windows sy Mac:
Raha hanavao ny iTunes amin'ny Mac dia sokafy fotsiny ny Mac App Store ary ampidiro ny fizarana Fanavaozana. Etsy ankilany, raha manana fanavaozana mandeha ho azy isika, dia hahazo fampandrenesana fa misy fanavaozana. Raha manaiky ny fampandrenesana isika dia hisintona azy ary hametraka azy ho azy.
Raha te hanavao ny iTunes ao amin'ny Windows isika dia milaza koa fa manavao azy ho azy fa, satria tsy dia ampiasaiko be loatra koa dia tsy azoko antoka tanteraka. Ny fantatro dia hoe raha manokatra iTunes isika ary misy kinova nohavaozina kokoa dia hahazo fampandrenesana izay hitondra antsika amin'ny tranonkala izahay mba hisintomana ny kinova vaovao an'ny haino aman-jery Apple.
Heveriko fa izany ihany. Manantena aho fa nanampy anao ary tsy manana fisalasalana intsony mifandraika amin'ireo rakitra .ipsw. Raha tsy izany, misy zavatra tianao ho fantatra momba ny firmware ho an'ny iOS?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iTunes » Aiza no itehirizan'ny iTunes ny rindrambaiko alaina avy amin'ny iPhone, iPad?
Paste dia hoy izy:
Voalohany indrindra, miarahaba anao amin'ny tranonkala,
Ny azoko azoko teto dia raha manana mpiara-miasa amiko manana orinasa 312 voatahiry ao amin'ny solo-sainy aho dia azoko soloina ny 313-ko ary apetrako daholo izany. Ok?
Mamaly an'i Passte
Enrique Benitez dia hoy izy:
Ity fotsiny dia tokony hialana amin'ny fisintomana indray ny rakitra amin'ny internet, fa ny maka azy mivantana amin'ny solosaintsika (raha toa ka efa nampidina azy io ny iTunes teo aloha).
Valiny tamin'i Enrique Benítez
Misaotra betsaka, voavaha ny fanontaniana !!
elphoneix dia hoy izy:
Miarahaba manao an'ity dingana ity aho dia apetrako ao amin'ny exploror ny làlana ary ampiako ny mpampiasa ahy ary tsy manadino azy io. Ampianaro aho azafady hankasitrahako ato am-poko. Manana premières windows 7 an-trano aho
Mamaly an'i elphoneix
Andao hojerentsika, ny iTunes-ko dia nampidina ny fanavaozana 4.2.1, amin'ny iPod-ko dia miseho ny fampahalalana toa manana izany aho ... fa manaraka ny làlana nomenao ahy aho ary tsy misy ...
Mamaly an'i Ipoder
Niezaka ny zava-drehetra aho, ary tsy hitako ny firmware an'ny iphone 3g .. Teigadrao aho fa raha tsy misy an'ireo rakitra ireo dia tsy afaka, mila fanampiana aho!
TOVOLAHY dia hoy izy:
Efa navadibadikao ve ny safidy hampisehoana fampirimana miafina amin'ny varavarankely? Heveriko fa mety izany ny olana… .. ao anaty fandaminana, fampirimana ary safidin'ny fikarohana, jereo, ary tsy maintsy apetrakao ny safidy hanehoana rakitra, lahatahiry miafina ary kapila.
Valio amin'i ROLO
garacias efa hitako ilay rakitra
E1000IOL dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fampahalalana, tena nilaina izy io ...
Valiny amin'ny E1000LIO
Misaotra betsaka, voavaha ny fanontaniana
Bradford35KRYSTAL dia hoy izy:
Nanana nofinofy ny hanao ny fikambananako aho, saingy tsy nahazo vola ampy hanaovana izany. Misaotra an Andriamanitra mpiara-miasa amiko nanoro hevitra ny haka ireo trosan'ny orinasa. Avy eo aho no nahazo ny indram-bola fohy ary nahatsapa ny nofiko taloha.
Valiny tamin'i Bradford35KRYSTAL
custom writing dia hoy izy:
Mba hahitana vaovao momba ity lahatsoratra tsara ity, ny mpianatra dia mividy lahatsoratra efa vita an-tsoratra sy lahatsoratra fanahafana amin'ny serivisy fanoratana taratasy. Saingy misy tolotra fanoratana taratasy sasany manolotra ny lahatsoratra momba ity lahatsoratra tsara ity.
Valiny amin'ny fanoratana manokana
taratasy taratasy dia hoy izy:
Namorona fahalalana ambony ianao hanampiana ireo mpianatra tsy za-draharaha amin'ny asa sorany taratasy fanadihadiana, heveriko fa. Na ny serivisy fanoratana taratasy aza tsy hanana fahaizana manao tantara an-tsekoly malaza toy izany.
Misaotra betsaka, ny marina dia efa notadiaviko io ary tsy hitako mihitsy
Tsy manana ilay fampirimana fanavaozana an'ny lozisialy ao amin'ny Windows XP aho.
Ny BAndis dia hoy izy:
Misaotra betsaka- !! Nanampy be ahy io !! Eny hitako io ary namonjy ahy adiny 2 ianao tamin'ny fisintomana azy indray
Mamaly an'i La BAndis
joselo.82 dia hoy izy:
Salama, misaotra betsaka, vatosoa ny info-nao.
Ho an'ireo izay tsy niseho ilay fampirimana, angamba nafeniny izany.
Tsindrio havanana amin'ny fanombohana (ny sary famantarana ny windows eo amin'ny zoro ambany ankavia)
mankanesa any amin'ny windows explorer / documents / mandrindra / mijery ary avelao ny safidy hanehoana rakitra sy lahatahiry miafina.
Mamaly an'i joselo.82
BillGate dia hoy izy:
io no lalana miafina sy voatahiry ny ipws ho an'ny windows7 fa soraty ao anaty motera fikarohana ireto: Fanavaozana ny lozisialy ary hitondra anao any amin'ny fampirimana fampidinana ipws
Valiny amin'ny BillGate
Space boy dia hoy izy:
Misaotra ... Hainareo ny manazava. Naharitra 1 volana vao nahalala
Mamaly an'i Space Boy
spout dia hoy izy:
Salama maraina, tsy manana an'io fampirimana io aho, toy ny nataoko, satria tsy te-hanavao ny iOS 4 intsony i iTunes ary tsy nisintona na inona na inona tamin'ny solosaiko.
Mamaly amin'ny cano
fitsaharana dia hoy izy:
he misaotra betsaka
Mamaly an'i Repos
Erobs56 dia hoy izy:
Valiny tamin'i Erobles56
Raha tsy hitanao eo izy dia azonao atao ny manome azy C: Documents and SettingsAll UsersProgram DataAppleInstaller Cache. Farafaharatsiny mba hitako tao
misaotra fa nanompo ahy io
Erik dia hoy izy:
misaotra lok olo nilaiko maika hanavao ny ipod amin'ny iTunes hafa satria tsy mendrika ny iTunes-ko hehehe misaotra betsaka
Mamaly an'i erik
sahozanina dia hoy izy:
Tuningcabo dia hoy izy:
GRACIAAAAAS an'arivony ianao namonjy ahy hisintona adiny 3
Mamaly an'i Tuningcabo
JAGER D. dia hoy izy:
MISY olako. MISY FANONTANIANA 8. ARY MBOLA HITADIAVITRA FA TSY HITADY AZY. AZON'OLON'OLO MANAMPY AZO MBOLA AZONAO ???…
Valio amin'i JAGER D
ha ha nataoko izany !!!… ho an'ireo izay manana windows 8 ny lalana dia: C: UsersUserAppDataRoamingApple ComputeriTunesiPhone Software Updates
kkkkk dia hoy izy:
misaotra fa manompo ny tenako aho
Mamaly an'i kkkkk
Luismur8 dia hoy izy:
Tsy hitako io lalana io amin'ny mac ...
Valiny amin'i Luismur8
Bill Gates dia hoy izy:
C: \_ Users \_ NAME KOMPUTER \_ AppData \_ Local \_ Apple \_ Apple Software Update
(apetraho zahao ireo rakitra sy lahatahiry olcutes)
Valiny amin'ny BillGates
Palma dia hoy izy:
Misaotra tompokolahy, fandraisana anjara tena tsara ...
Valiny tamin'i Palma
Misaotra hitako teo no ho eo 😉
PJ dia hoy izy:
misaotra, fanampiana lehibe
Valiny amin'i PJ
Aiza ireo rakitra ipsw voatahiry ao amin'ny kopian'ny milina fanaovana fotoana? ... Miezaka ny mahita azy aho, ary tsy haiko akory ny fomba hampisehoana ny fampirimana famakiam-boky ao anaty masinina.